Beesha Caalamka iyo IGAD oo soo Saarey Qoraal ku ...............
Maanta 9-maarso,04 ayaa Beesha Caalamka iyo IGAD soo saareen Qoraal ka dib markii shaley Kooxda SRRC-da u direen Qoraal codsi ah iyagoo markale wasiirka arrimaha dibada Kenya ahna guddoomiyaha guddiga Farsamada IGAD ka codsadey in uu cadeeyo qoddobka 30-aad ee Qoraalka Buuga Axdiga iyo dastuurka ee shirka Nabada Soomaalida ee ka socda Kenya 16-bilood.
Qoraalka ayaa marka hore qoray heshiisyadii kala duwanaa ee shirka Nabada Soomaalida laga soo bilaabo 15-Oktoober,2002. Beesha caalamaka iyo IGAD ayaa marka kale taageero buuxda siiyey heshiiskii hogaamiyayaasha Soomaalida ay 29-janaayo,04, ku gaareen guriga Madaxtooyada Kenya. Waxay kaloo cadeeyeen qodobka xulida xubnaha baarlamaanka ee 30-aad in uu yahay sida wasiirka arrimaha dibada Kolonzo Misayoka u qeexay 17-bishii Febraayo,04, kaasoo dhameystirayey heshiiskii hogaamiyayaasha Soomaalida ku gaareen kulankii wada tashigam ee safari Park oo socdey 9-janaayo ilaa 29-janaayo,04. Waxay kaloo beesha Caalamka iyo IGAD soo dhaweyeen warsaxaafadeedkii wasiirka Arrimaha dibada ee kenya 5-bishan Maarso oo qorayey in wajiga seddexaad la qabanayo 13-bishan.
Beesha Caalamka iyo IGAD ayaa soo dhaweynaya Hogaamiyayaasha Soomaalida ee shirka dibada uga maqan in ay dib ugu soo laabtaan. waxay kaloo ayideen Go'aankii Golaha Amaanka ee 25-Febraayo oo sheegaya in Ciidamo Nabad Ilaalin oo Afrikaan ah la geenayo Soomaaliya .
Beesha Caalmaka iyo IGAD ayaa mar kale ka codsadey hogaamiyayaasha Soomaalida qaarkood in ay ka gudbaan cabashadooda iyagoo fiirinaya dhibka shacabka Soomalida oo dagaalo sokeeye ku soo jirey 14-sanno ugu danbeeyey.
Hogaamiyayaasha SRRC: Waxaan Dawlada Kenya kala Laabaney Kalsoonida, Wejiga 3-aad ee shirka waa in lagu qabtaa wadan kale.
Hogaamiyayaasha SRRC-da ee ku sugan madasha shirka ayaa maanta wasiirka arrimaha dibada kenya ka codsadey in uu faahfaahin ka bixiyo warsaxaafadeedkii 6-bishan Maarso, waxaa kaloo ay sheegeen in wareysigii safiirka dawlada Kenya ee Soomaaliya uu siiyey BBC-da uu khalad ahaa.
Ugu danbeyn waxay codsadeen in shirka wajigiisa 3-aad lagu qabto meel kale ama in uu qeexo wasiirka qoddobka 30aad ee xulida xubnaha baarlamaanka ergada la horkeeno ka dibna iyaga ansixiyaan.
Kooxda SRRC-da ayaa caalamka u sheegtay in ay kala laabanyaan kalsoonidii ay ku qabeen kenya oo ay doonayaan in shirka qaybtiisa danbe lagu qabto meel kale sida Uganda.